Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyeed ee labada dal | STN Somali
Home Caalamka Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyay in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyeed ee...
War qoraal ah oo goor dhow ka soo baxay Madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiiyeen in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa saaka wada hadallo mira dhal ah ku yeeshay Aqalka Madaxtooyada Kenya.
Ajandaha wada hadalladan oo ku koobnaa xal u helista mugdiga diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa madaxweynayaashu waxa ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo, lana xoojiyo xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood, kaasoo ku dhisan is ixtiraam iyo wada shaqeyn buuxda oo la xiriirta dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyo baayac mushtarka.
Wada hadalladan ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii dalalka gobolku ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada, gobolkana loogu soo dabbaali lahaa nabadgelyo iyo xasillooni.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay uga mahadcelinaysaa Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed kaalinta uu ka qaatay wada hadalladan dib loogu yagleelayo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya”ayaa lagu yiri War saxaafadeedka Madaxtooyada ka soo baxay.
Ma jirto faah faahin intaa dhaafsiisan, sidoo kale qoraalka lama socon wax sawir iyo muuqaal ah, iyadoo nuxurka wada hadalada labada hoggaamiyo oo ah mid iska kooban goor dhow lagu baahiyay barta Twitter-ka ee Villa Somalia.
Previous articleSaddex bilood ka hor waxa ay kabalyeeri ka aheyd makhaayad ku taallo magaalada New York City…….
Next articleBooliska Jamhuuriyada Jeeg ayaa toogasho ku dilay libaax kadib markii uu si xun u weeraray ninkii lahaa.